Kursigii la hakiyey oo Doorashadiisu ka dhacday Baydhaba iyo Wiilkii uu watay Lafta-gareen oo kusoo baxay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Kursigii la hakiyey oo Doorashadiisu ka dhacday Baydhaba iyo Wiilkii uu watay Lafta-gareen oo kusoo baxay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Kursigii la hakiyey oo Doorashadiisu ka dhacday Baydhaba iyo Wiilkii uu watay Lafta-gareen oo kusoo baxay
Waxaa Magaalada Baydhabo socota doorashada kursiga tirsigiisu yahay HOP#103 oo ay shalay hakiyeen Guddiga Doorashada Hee Federaal, kadib markii ay diideen Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed.
Kursigan waxaa laga hor istaagay inuu u taratamo Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, balse guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ay ku adkeysteen in la qabanayo doorashadiisa, markii ay amar ka heleen madaxweynaha K/Galbeed C/casiis Laftagareen.
Kursiga muranku ka taagan yahay ee HOP#103 oo doorashadiisa ay goor dhoweyd soo dhammatay waxaa kusoo baxay Maxamed Cali Xasan oo ahaa Wasiirka Wasaarada Howlaha Guud Koonfur Galbeed, kaasoo uu watay Madaxweynaha K/Galbeed, iyadoo uu la tartamay Mukhtar Cali Ibraahim.
Natiijada codeynta ayaa lagu sheegay in 78 cod uu helay Maxamed Cali Xasan, halka Mukhtar Cali Ibraahim uu helay 18 Cod, waxaana Xumaaday 4 Cod.
Kuraasta kale ee Doorashadooda ka dhaceyso Baydhabo ayaa waxaa ka mida:
Kursiga HOP189: oo uu horay ugu fadhiyay Sheekh Aadan Madoobe
HOP041: oo uu ku fadhiyo hadda Idiris Cabdi Dhaqtar
& Kursiga HOP042 oo ay horay ugu fadhisay Hani Maxamed Aadan.
Previous articleGuddiga Khilaafaadka Doorashada oo joojiyey Natiijada Kursiga uu kusoo baxay Taliyaha NISA
Next articleAskar ka tirsan Daraawiishta Puntland oo ku biiray Ciidamada ku kacsan Siciid Deni ee PSF